देउवा, दहाल र ओलीको कलंकको भारि कार्यकर्ताले बोक्ने कि नबोक्ने ? » नेपाल प्लस
देउवा, दहाल र ओलीको कलंकको भारि कार्यकर्ताले बोक्ने कि नबोक्ने ?
राप्रपासित दोस्रो ठूलो दल एमालेले चुनावी गठबन्दन गरेको छ । माओवादी र नेपाली कांग्रेस केहि सिट सुरक्षित गर्न अर्को गठबन्धन गरिरहेका छन् । संघिय फोरमलाई बाबुरामले भोट माग्दै छन् । अहिलेको संघिय गणतन्त्रको मोडेल हो यो । शेर बहादुर र प्रचण्ड दुई जना प्रधानमन्त्रि बन्नकालागि यो गठबन्दन गरेको स्पष्ठ छ । उता बाबुराम भट्टराई अस्तित्वकै अलगि जतापनि मिल्ने निति लिएर संघिय फोरमलाई मत माग्दै हिँडेका छन् । के यो गठबन्दन जायज छ ? यि प्रमुख पार्टीका निति र दस्तावेजले यस्तो गठबन्दन गराउन सहज बाटो खोलिदिन्छ ? पूर्णरुपमा बिरोधी, शत्रु पार्टीहरु कसरि निर्वाचनमा एक हुन सक्छन् ?
नेपाली कांग्रेसको मूल निति राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद । लिखित मूल निति जे भएपनि यो पूँजीपतिहरुको पार्टी हो । माओवादी सेन्टरको मूल निति जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्ने । उसओ नामैले भन्छ, ऊ माओका नितिहरु पालना गराउन चाहन्छ। नौलो जनवादी राज्यसत्ताकालागि लड्छ । त्यसकालागि पूँजीवादी सत्ता र सरकार ढाल्नै पर्छ । नेपाली कांग्रेसको निति र सत्तालाई नढाल्नेसम्म माओवादीले चाहेको राज्यसत्ता स्थापना हुन्न । माओवादीले चाहेको राज्यसत्तालाई निषेध नगरेसम्म नेपाली कांग्रेस अस्तित्वमापनि रहन सक्दैन । यस्ता दुई परस्पर बिरोधी पार्टीको कसरि निर्वाचनमा गठबन्दन हुन सक्छ ? आफ्ना निति, बिधि र बिधानलाई पूर्णरुपमा कुल्चिएर, च्यातेर, लत्याएर र जलाएर कुर्सीकालागि जेपनि गर्न सक्ने नेताहरुको मिलोमतो भयो भने मात्रै त्यो संभव छ । अहिले भएकोपनि त्यहि हो । प्रचण्ड र शेर बहादुरलाई सत्तामा पुर्‍याउन भएको गठबन्दन हो यो ।
उता नेकपा एमालेले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसित चुनावी तालमेल गरेको छ । राप्रपा शामन्तहरुको पार्टी हो । यो राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने मुख्य निति अँगालेको पार्टीपनि हो । हिजो एमाले यहि राजसंस्थाका बिरुद्द लडेर गणतन्त्र स्थापना गर्न लाग्यो । नेपाललाई धार्मिक रुपमा स्वतन्त्र मुलुक बनाउने अभियानमा जनआन्दोलनमा होमियो । एमालेको अहिलेको निति हिन्दू राज्य र राजतन्त्र फर्काउने छैन । हिजो जेका बिरुद्द लडेको थियो, जुन नितिका बिरुद्द जनआन्दोलन गरेको थियो आज त्यहि निति अंगालेको पार्टीसित कम्युनिस्ट नाम भिरेको एमालेले कसरि गठबन्दन गर्न सक्छ ?
निर्वाचन भनेको सबै दलले आ आफ्ना पार्टीका निति लिएर जनतामा जाने हो । जनताले बिभिन्न पार्टीका निति र योजना हेरेर जनप्रिय दल छान्ने हुन् । आफ्नो हितमा कुन दलले निति ल्याउँछ त्यहि दल रोज्ने हो । तर दुई परस्पर बिरोधी दलहरुका निति, कार्यक्रम र योजना भिन्न हुँदाहुँदैपनि तिनले गठबन्द गरेपछि जनताले कसलाई छान्ने ? परस्पर बिरोधी दलहरु कमजोर भएका ठाउँमा एक अर्कासित मिल्दैमा तिनका निति मिल्छन् ? कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेस, राप्रपा वा एमालेको निति हेरेर मतदान गर्ने तर त्यहि निति मन पराउने अर्को निर्वाचन क्षेत्रका जनताले आफूलाई मनै नपरेको, आफ्नो बिचारभन्दा फरक निति बोकेको माओवादी केन्द्र वा संघिय समाजवादी फोरमलाई कसरि मतदान गर्न सक्छन् ? के यो जनताको विश्वास र बिचारमाथिको हमला, अपमान होइन ?
हिजो राजतन्त्र कालमा माओवादी, एमाले र नेपाली कांग्रेस सबै दबाइएका थिए । तिनका कार्यकर्ताहरु गाउँ गाउँमा सताइए । दमन, आक्रमण र जेलनेल भोगे । आज एमालेले कसरि राजसंस्थाको पूनर्स्थापना गर्ने निति बोकेको, जनआन्दोलनमा दमन गरेको पार्टीसित गला जोड्न सक्छ ? कसरि हिजो टाउकाको मोल तोकेकै नेतासित माओवादीले चुनावी तालमेल गर्न, एक हुन सक्छ ? माओवादी र नेपाली कांग्रेस दुबैले एक अर्कालाई सताएका, दुख दिएका भनिएका कार्यकर्ताले कसरि मतदान गर्न सक्छन् ? जोबाट सताइएको हो उसैका पक्षमा मतदान गर्न कार्यकर्ताको मनले मान्ला ? तिनका हात नकाप्लान् ? नेताहरुले अप्राक्रितिक, आफ्नै निति बिरोधी गठबन्दन गरे भन्दैमा के तिनका कार्यकर्ताले आफ्ना नितिहरु भुलेर आफ्ना बिरोधीलाई मतदान गर्लान् ?
जिन्दगीभरि पूँजीवाद अँगालेर हिँडेको पार्टी नेपाली कांग्रेसले पूँजीवाद ध्वस्त पारेर नौलो जनवाद ल्याउन भन्दै हिँडेको माओवादीलाई कसरि भोट देला ? नौलो जनवाद भन्दैँ एक दशक भन्दा बढि उदुम मच्चाएको माओवादीले कांग्रेसलाई कसरि मत देला ? नेता मिल्दैमा कार्यकर्ताको हात काप्दैन, मन भरंग हुन्न होला मत दिने बेला ? देउवा र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सारा कार्यकर्ता सति जालान ? नितिसिति गोलीमार गर्लान् ? केपी ओली, प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई र शेर बहादुरले कुर्सी र अस्तित्वकालागि कलंकित काम गरे भन्दैमा तिनका कार्यकर्तालेपनि त्यहि कलंकको भारि बोक्न तयार बन्लान् ?